Hooyada iyo dhalaanka-Qoyska - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Hooyada iyo dhalaanka-Qoyska - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Marxalad kasta oo nolosha ah waxaan isku dhafanaa jirka, maskaxda, iyo qalbiga annaga oo bixinna daryeelka aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda, iyo adeegyada bulshada iyada oo loo marayo xiriir soo dhaweynaya, xoojiya, oo ka caawiya kor u qaadista bulshada. Maadaama aan nahay Guriga Caafimaadka ee Bukaanka-bukaanka ah, waxaan bixinnaa qaab loo dhan yahay oo lagu bixiyo adeegyada daryeelka caafimaad oo ka turjumaya dhaqamada, qiimayaasha, iyo baahiyaha shaqsiyaadka aan u adeegno.
Barnaamijka Dhalmada ka Horreeya
Barnaamijkayaga Hore ee Dhalmada ka hor waxay bixisaa adeegyo dhammaystiran laga bilaabo daryeelka ka-hortagga uurka ee sii wadidda dhalmada ka dib. Bixiyeyaashayada waxay iskaashi la leeyihiin Dhakhaatiirta Caafimaadka Guud ee Lancaster ee jooga Isbitaalka Haweenka & Dhallaanka in la siiyo xasillooni, raaxo leh, daryeel umul-buuxa. Barnaamijku waa mid jajaban isla markaana shaqsi ahaan loogu talagalay baahiyahaaga. Waaliddiinta iyo waalidku-lahaanshaha waxay ka faa'iideysan doonaan:
La-talin horudhac ah
Tixraacyada latalinta hiddaha iyo qiimeynta hidde
La talinta dhalmada iyo daryeelka
Wadahadal goobta ah oo lala yeelanayo dhakhtarka dumarka / dhakhtarka dumarka (markii loo baahdo)
Daryeelka koowaad iyo uurka kahor
Daryeelka dhalmada ee khatarta sare leh
Isuduwidda daryeelka dhalmada ka hor
Barashada umusha waxaa lagu bixiyaa si shaqsi ah ama iyada oo loo marayo CenteringPregnancy® Wellness Circles
La talin xagga nafaqada ah
Daryeelka umusha kadib & la talinta nuujinta
Bixiyeyaashayadu waxay si qoto dheer uga taxadaraan wanaaga dumarka iyo xasiloonida maskaxda iyagoo diiradda saaraya waxbarashada iyo daryeelka bukaanka ku saleysan. Waxaan bixinaa adeegyo iyo waxbarasho iyadoo loo marayo heerar kala duwan oo nolosha dumarka:
Qiimaynta iyo daaweynta arrimaha caafimaadka dumarka
Tijaabada kansarka naasaha iyo u diritaan mammogram
Tijaabada baarista tooska ah iyo gudbinta colonoscopy-gu
Tixraacyada loogu talagalay daryeelka nafaqada
Waxbarista galmada ku faafa iyo waxbarashada
Adeegyada qorsheynta qoyska oo dhan iyo la-talinta ilmo-haynta carruurta
Waxbarashada iyo xanaaneynta (menopause iyo menopause-ka kahor)
Adeegyo badan oo caafimaad oo bilaash ah ama qiimo jaban oo loogu talagalay haweenka u qalma
Kooxdayada daryeelka qoyska-ku-saleysan waxay hubineysaa in adiga iyo qoyskaaguba aad caafimaad qabtid oo aad taageersan tihiin inta cunuggaaga uu ku korayo iyo horumarkiisa iyagoo bixinaya:
Wadatashi hagaagsan ee Ilmaha ayaa loo fidiyaa si shaqsi ahaaneed ama mid guud CenteringParenting® Wareegyada Fayoqabka
Tixraacyada loogu talagalay barnaamijyada waalidiinta ee ku takhasusay waalidnimada ee Gobolka Lancaster
Fayo-dhowrka Goobo daryeel shaqsiyeed, waxbarasho kooxeed, iyo taageero facooda caafimaadka dumarka, waalid-ahaansho, iyo waalidiinta iyo carruurtooda.
Wixii macluumaad dheeri ah, ama in aad jadwal u sameyso kalfadhiga Fayoqabka, fadlan la xiriir Isku-duwahaaga Fayoqabka Wanaagsan ee 717-299-6372 fidsan. 11210.
The STEM Wuxuu Bilaabmayaa Hada Barnaamijka Digital-ka waxay bilaabataa dhalashada si ay u siiso waalidiinta taageerada, ilaha, iyo waxbarashada.
Bilaabidda STEM Hadda waxaa ka go'an inay ka caawiso waalidiinta inay carruurtooda siiyaan bilawga ugu fiican ee suurogal ah. Sayniska, Teknolojiyada, Injineeriyada, iyo barashada xisaabta waxay ku bilaabmaan dhalashada. STEM waxay bilaabmaysaa Hada waxay ku tusi doontaa sida!
* Dhammaan bukaannada Xarunta Caafimaadka ee Lancaster way awoodaan iska qor halkan si aad u hesho rukhsad bilaash ah adoo adeegsanaya nambarka dhimista lhc2019.